Facebook , Viber, Messger သုံး ရင်း ထောင်နန်း မစံချင်ရင် ဒါလေး ဖတ်ထားပါ… – Let Pan Daily
Facebook , Viber, Messger သုံး ရင်း ထောင်နန်း မစံချင်ရင် ဒါလေး ဖတ်ထားပါ…
ပုဒ်မ၆၆။ မည်သူမဆို အောက်ပါ ပြုလုပ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူးလွန်ကြောင်း ပြစ်မှု …!ထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင်ထိုသူအား ၃နှစ်ထက်မပိုသော ထောင်ဒဏ်ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်၂ရပ်လုံးဖြစ်စေချမှတ်ရမည်။ပုဒ်မ၆၆(က)။ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်အတွင်းသို့ ယင်း၏ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲခွင့် ရှိသူ၏ ခွင့်ပြုချက်မရှိပဲ ဝင်ရောက်နှောင့်ယှက်ခြင်း၊
စံချိန်စံညွှန်း သတ်မှတ်ချက်ကိုဖြစ်စေ၊ မူလ အနေ အထားကိုဖြစ်စေ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးခြင်းနားရှင်အောင်ပြောရရင်ပုဒ်မ၆၆(က)facebook /gmail ကို ခိုးယူခြင်းပါ။ Passwordပြောင်းခြင်း / gmailပြောင်းခြင်းပါ။
ပုဒ်မ၆၆(ခ)။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကို ထိခိုက်စေရန် ဗိုင်းရပ်စ် ( သို့မဟုတ် )အခြားနည်း နဲ့ ဝင်ရောက်စေခြင်း…!!နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ခ)link အတုတွေကတဆင့် အချက်အလက်passwordခိုးယူခြင်းပါ။#ပုဒ်မ၆၆(ဂ)။
#ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံး၍ #ငွေကြေးနဲ့ပစ္စည်းကို ခိုးယူခြင်း၊#လိမ်လည်ခြင်း၊#အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ်#အကျိုးပျက်စေခြင်း#နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~#ပုဒ်မ၆၆(ဂ)#onlineshoppingကတဆင့်ငွေလိမ်ယူခြင်းမျိုးပါ။
ပုဒ်မ၆၆(ဃ)။ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကိုသုံးပြီးလူတစ်ယောက် ကိုခြောက်လှန့်ခြင်း၊ အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊မတရားတားဆီးကန့်ကွတ်ခြင်းအသရေဖျက်ခြင်း၊ နှောက်ယှက်ခြင်း၊မလျှော်သြဇာသုံးခြင်း ၊ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊မရိုးဖြောင့်သောနည်းဖြင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်း
နားရှင်းအောင်ပြောရရင်~~~ပုဒ်မ၆၆(ဃ)facebookက တဆင့်လူ တစ်ယောက်ကို ဆဲဆို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊mentionခေါ်ဆဲခြင်း၊ပုံတွေသုံး မဟုတ်သတင်းရေးခြင်း၊ ပျက်ဆီးစေမှုနဲ့ tag တွဲခြင်း၊သူတစ်ပါး တင်ထားသော Post ကို By Name ဖြင့် Screen Shot ပြန်ယူတင်ခြင်း ..,
Share အဖြစ်တင်ခြင်း၊မရိုးသားသည့်သဘောဖြင့်Photo Comment ပြုလုပ်၍ မန့်ခြင်း…!စတဲ့ အပြုအမူတွေ ကျူးလွန်ရင်ကိုယ်တိုင်တရားဆွဲစရာမလိုပဲ ကြားလူတစ်ယောက်ကအမှုဖွင့်ပေးရုံ နဲ့ အာမခံ မရှိထောင်၃နှစ်ချလို့ရပါတယ်။
Screenshot သက်သေအထောက်အထားနဲ့ ကျိန်းသေထောင်ကျအောင် ချလို့ရတယ်။ပုဒ်မ ၆၆ (ဃ)ကိုယနေ့ facebookပေါ်မှာကျူးလွန်နေသူတွေ အများကြီးပါ။ချမှတ်ပြီးသား ဉပဒေအတွင်းမှာ ဟောင်းသွားတာမရှိဘူး…!
ဥပဒေ မပြုရသေးခင်သာနောက်ကြောင်းပြန်အရေးယူမရတာ။တကယ်တမ်းဥပဒေကို နားလည်သူကလူတစ်ယောက်ကိုBy name တပ် facebook ပေါ်စော်ကားဖို့နေနေသာ Share တာတောင် သတင်း ပိုစ့် ၊ပညာပေး ပိုစ့်လောက် shareရဲတာComment ပေးတာတောင် သတိထားပေးကြရတယ်။
ပါးစပ်ကပဲပြောပြော စာနဲ့ပဲပြောပြော အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်တဲ့အဆင့်ရောက်ရင်တော့ အသရေဖျက်မှု သတ်မှတ်ဖွင့်ဆိုချက် ရာဇသတ်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၀၀ နဲ့စပါတယ်။အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ပုဒ်မ ၅၀၀/ ပုဒ်မ ၂၅/ ပုဒ်မ ၆၆ဃ ဆိုပြီး ကွဲပြားသွားတာကို သိရပါမယ်။အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ရိုင်းစိုင်းသည့် ကောမန့်များပေးခြင်းChat box တွင် ရိုင်းစိုင်း သည့်စကားများပြောဆိုခြင်းအုပ်စုဖွဲ့၍ ရိုင်းစိုင်းသည့်
၄။ ၆၆ဃ ဟာ ရဲအရေးပိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်း သိရှိသူ မည်သူ မဆို တိုင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိပြီးပုဒ်မ ၅၀၀ မှာတော့ နစ်နာသူ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်သာလျှင် တိုင်ကြားဆွဲဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။မပိုင်ရင်ခြင်မရိုက်နဲ့အလဟဿ အသားနာတယ်…..
ပိုင်ရင် မြွေခေါင်း တက်ဖမ်း မလှုပ်နိူင်မှ ရိုက်ပါ….။
ဒီလောက်ဆိုရင် တီးမိခေါက်မိရှိ လောက်ပြီ ထင်ပါတယ် ဘာပဲပြောပြော သိထားတော့ ငပိကြော် တွေဘာတွေ ကြိုပြီးပြင်ဆင်နိုင်တာပေါ့…